Imandarmedia.com: देउवा सरकारमा माओवादीबाट महराले नेतृत्व सम्हाल्ने, जर्नादन शर्मा गृहमन्त्री !
Main News, Political » देउवा सरकारमा माओवादीबाट महराले नेतृत्व सम्हाल्ने, जर्नादन शर्मा गृहमन्त्री !
आज नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ । यस्तैमा कुन मन्त्रालयमा कुन पार्टीको तर्फबाट को होला सबै तिर चासो र चर्चाको बिषय बनेको छ ।
विशेष स्रोतले इमान्दार मिडियालाई दिएको जानकारी अनुसार माओवादीलाई ८ वटा मन्त्रालय दिन कांग्रेस तयार भएको छ । तर कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने सहमति भइसकेको छैन । शुरुको चरणमा दुई मन्त्री सरकारमा सहभागि गराउने माओवादी हेडक्वाटरको तयारी रहेको छ । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार कुन मन्त्रालय दिने÷लिने भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको छैन ।